Iza amin'ireo loharanon-kevitra no afaka manampy ahy indrindra amin'ny backlinks DoFollow?
Mitady vohikala na blôgy izay mety ho an'ny backlinks DoFollow, mety hieritreritra ny fanehoan-kevitry ny blôgy ianao, ny famoahana ny fandefasana, ny lahatahiry sy ny lisitry ny orinasa, ary ny sisa. Mazava ho azy, azonao atao ny mahita vahaolana tsara be indrindra ho an'ny rohibe avo lenta hanorenana any. Saingy ny tanjona dia, misy vahaolana farany ve ny tsara indrindra amin'ny tsara indrindra ho an'ny backlinks DoFollow indrindra? Manana toerana maromaro ho anao aho - kansas city database development.
Fa alohan'ny hamerenana ny tsirairay amin'izy ireo dia andao hanomboka amin'ny famerenana fohy. Raha ny marina, nahoana ianao no tokony hanana izany ao amin'ny tranokalanao na blôginao? Manao ny tsara indrindra azonao hahazoana ny backlinks DoFollow, karazana tombontsoa inona no azontsika antenaina amin-dry zareo?
Ny tombontsoa tsara indrindra amin'ny BackLinks
dia nitombo ny Search Traffic nalefa mivantana tamin'ny tranokalanao na ny blôgy;
Fanamafisana orinasa manam-pahefana manome fanatsarana maharitra ny tetikasanao;
mampitombo ny CPC AdSense (ny vidin'ny klikao);
mitazona ny fandrosanao amin'ny Google PageRank;
hanatsara ny kasainao Search Engine ankehitriny ary hanamarina ny fandrosanao bebe kokoa.
Misy eo amin'ny ampahatelon'ny toerana avo nasongadina izay mety hahitanao tsara indrindra ny backlinks DoFollow. Ankoatr'ireo hafa dia tiako ny hanoritsoritra ireo loharanom-pitaovana an-tserasera toy ny mety ho toerana azo antoka hanomboka ny kickass mba hananganana rohy miaraka amin'ny anarana hoe DoFollow. Eto ambany eto aho manomboka amin'ny Google Plus, YouTube, LinkedIn, mba hifarana amin'ny Blogger dot com. Noho izany, andeha isika hidina amin'ilay raharaha!
Ny maha-iray amin'ireo tranonkala malaza amin'ny Media Social, Google Plus dia tokony ho fantatra koa ho sehatra sosialy goavana ho fampandrosoana ho an'ny tranokalanao na blôginao. Minoa ahy sa tsia, fa noho ny antony maromaro, io serivisy serivikana nataonà grenady lehibe manerantany io dia matetika no toa ambany ambany noho ny maro amin'ireo webmaster sy tompon'ny tranonkala. Na izany aza, manoro hevitra ny miezaka ny mombamomba anao manokana aho - mba hankafy ny kalitao DoFollow backlinks amin'ny fahefana ambony ao anatin'ny minitra fotsiny.
Ity fampiantranoana haino aman-jery malaza ity dia azo ampiasaina mba hahazoana backlinks fanampiny fanampiny - ny fananganana ny sehatra manokana sy famenoana "manodidina". Raha manao izany ianao, na izany aza, dia afaka manana ny backlinks NoFollow ihany ianao. Mba hahazoana lohamilina tena sarobidy kokoa amin'ny DoFollow, dia tsy maintsy mijery ny fanovozam-pandaharana haingana ianao. Amin'izany fomba izany, tsindrio ny "tranonkala mifanaraka" ary apetraho amin'ny URL fotsiny ny tranonkalanao. Fanamarihana, mba hahatonga ny sifotra ho sahaza araka ny tokony ho izy, ianao dia tsy maintsy mandalo fizotry ny fanamarinana ao amin'ny Google Webmaster Tools aloha.
Tsy toerana tsara fotsiny ny hanamboarana tambajotra manerantany amin'ny fifandraisana matihanina sy ara-barotra, fa fahafahana tena tsara ny manana fanamafisam-pahefana avo roa heny - ary azo aseho amin'ny ireo mpampiasa liana manerantany. Ary tsy te-hamaly izany ianao, sa tsy izany? Raha te hamorona dikan-teny hafa miaraka amin'ny toetra AttFollow ao amin'ny LinkedIn - mamorona fotsiny ny mombamomba anao manokana, mandany roa minitra mba hamenoana ireo fizarana ilaina, ary hizara rohy ohatra ho an'ny lahatsoratra amin'ny blôginao, famerenana ny vokatra, sns.Amin'izany fomba izany, mety hisy rohy izay zarainao ho lasa sarobidy. Mahagaga, eh?
Ity sehatra fitoraham-blaogy ity dia tsy malaza, saingy tena manantitrantitra aho fa ny manamarina izany amin'ny toe-javatra rehetra. Ity ny fomba ahafahanao miverina miaraka amin'ny DoFollow any - just launch your new blog support on Blogger dot com, ary mandany fotoana kely hamenoana izany amin'ny votoaty tsara. Ampifandraiso amin'ny tranokalan'ny orinasa na blôginao lehibe indrindra - ary vita izany!